ERDOGAN oo JAWAAB ficil ah ka bixiyey heshiiska ay gaareen Masar iyo Greece? - Caasimada Online
Home Dunida ERDOGAN oo JAWAAB ficil ah ka bixiyey heshiiska ay gaareen Masar iyo...
ERDOGAN oo JAWAAB ficil ah ka bixiyey heshiiska ay gaareen Masar iyo Greece?
Ankara (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu dib u bilaabay soo saarista khayraadka ku jira bariga badda Mediterranean, isaga oo ka jawaabaya heshiis ay gaareen Masar iyo Giriigga ay ku sheegteen in ay xaq u leeyihiin isla aagaas.
“Waxaan billownay shaqadii macdan qodista mar kale” ayuu Erdogan u sheegay suxufiyiinta, kadib markii uu ka qayb galay salaadii Jimcaha ee Masjidka Hagia Sophia ee magaaladda Istanbuul.
Waxaa uu hadalkiisa ku daray in markabka Barbaros Hayreddin Pasa oo Turkiga u qaabilsan indh-indheynta macdanta dhulka loo diray gobolka si uu shaqadiisa uga guto. Markabku waxaa uu kasoo tagay Khubruz dabayaaqadii bishii July waxaana uu hadda joogaa gobolka.
Horaantii bishaan Masar ayaa sheegtay in sahanka Turkigu uu u qorsheeyay inuu ku sameeyo bariga badda Mediterranean-ka ay kusoo durugtay biyaha ay xukuumadda Qaahira sheegato in ay u leedahay xaq lama taabtaan ah.
Heshiiska u dhexeeya Giriigga iyo Masar waxaa markii u horreysay waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Shoukry, kadib markii Khamiistii uu shir-jaraa’id ku qabtay caasimadda Qaahira, waxaana xilligaas garabkiisa taagnaa dhigiisa Giriigga Nikos Dendias.
Labada diblomaasi waxay difaaceen heshiiska ay gaareen, oo bariga Mediterranean-ka ku tilmaamaya, meel ay ku keydsanyihiin Saliid iyo gaas dabiici ah iyo in ay tahay aag dhaqaale oo iyaga gaar u ah, si waafaqsan sharciga caalamiga ah.
Dowladda Turkiga ayaa diiday heshiiskaas, waxayna ku tilmaantay “sharci darro aan sax ahayn”.
War kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in aysan jirin xuduud badeed u dhaxeysa wadamadda Giriigga iyo Masar, taasi oo heshiiska labada wadan ka dhigeysa micno la’aan.
“Shaki kuma jiro in Turkigu uusan marnaba ogolaan doonin in dhaq-dhaqaaq laga sameeyo aagaas, waxaana uu difaaci doonaa xaqa sharciga ah iyo danihiisa bariga Mediterranean-ka,” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga.
Masar iyo Giriiga ayaa muddo badan kasoo horjeeday dhaq-dhaqaaqa Turkigu uu ka sameynayo badda Mediterranean-ka.
Sanadkii lasoo dhaafay Turkigu waxaa uu heshiis la sixiixday dowlada Liibiya, talaabadaas oo kordhisay muranka ka taagan gaaska ku keydsan Mediterranean-ka.
Masar iyo Giriigga ayaa heshiiskaas cambaareeyay waxayna ku tilmaameen “sharci darro iyo xad-gudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah”.
Turkiga iyo Giriigga oo kawada tirsan NATO ayaa ku murmay khayaraadka ku keydsan biyaha ay wadaagaan, taasi oo keentay in hoggaamiyaha Germany Angel Markel ay labada hoggaamiye la kulanto si ay xiisadda u qaboojiso.